Waldhibdee ABO fi OPDO akka Rakkina Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) isa Guddaatti Fudhachuun Qabsicha Xiqqeessuudha – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooWaldhibdee ABO fi OPDO akka Rakkina Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) isa Guddaatti Fudhachuun Qabsicha Xiqqeessuudha
Waldhibdee ABO fi OPDO akka Rakkina Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) isa Guddaatti Fudhachuun Qabsicha Xiqqeessuudha.
Bedhaasaa Taadasa tin, Bitooteessa 3, 2019
QBO gudaadha. Waloodha. Bal’ina qaba. Gadi fageenya qaba. Hidda dheera qaba. Bubbeen hin raafamu. Hin jigu. Bakakkaan hin ajjeessu. QBO akka coqorsaa lata. Hin cooligu. Tooraa fi toftaa qaba. Kaayyoo qaba. Gareen gabaabaadha. Gareen yeroo dheera fudhata. QBO ni bishaata, ijas ni horata. Ni bula ni oola malee ilmaan Oroomoo hundi (warra qabsichatti gufuu ta’aa jiran dabalatee) bu’aa QBO ni gonfatu.
Oromiffaan hojjechuu fi barachuu danda’un bu’a QBOti. Sana argachuuf yeroo dheera fudhate. Innillee ni jalqabame malee xumura hin arganne. Saboonummaan bu’a QBOti. Oromummaa ofiitti boonuun, maqaa ofiitti gammaduun, eenyumaa offii ifatti ibsachuu danda’uun bu’aa aarsaa qabsaawonni Oromoo ABO hundeessanii, WBO ijaaranii, dhiiga isaanii itti dhangalaasani, lafee isaanii itti cacabsanii, nuuf buusanii darbanidha. Hara’as itti darbaa jiru: Marroo fi Goolichaan waahiloottan isaanii dabalatee bosona keessatti han hafan kaayyo QBOf jedhanii malee jireenyi itti tolee miti. Bineensummaa hinqabani.
Akkeekni QBO mirga Oromo kabschiisuu duwwa miti. Qabeenya Oromiyaa han dhuunfaa uummata Oromoo gochuus ni dabalata. Abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuudha. Hankoo hankooti, hankoo hinkennu hankee hinbarbaadu jechuun dhipumaa akka hin taane dhugoomsuudha.
QBO raakko keessa darbe. Keessas jira. Gara fuuldurattis rakkoon isa ni qunnama. Qabsoon keenya diina hedduu qaba. Gartokko of beeksisee, Oromo nyaachuuf fiiga. Inni kaanimoo afaan keenya dubachaa, waan ilmaan Oromoof hojetu fakaatee nutti dhufa. Kaan ifaan deema. Kaan dukkana uffatee nutti dhufa. Kaan cimaadha. Kaan dadhabaadha.
Waldhibdeen ABO fi OPDO guduu jiruu isa dadhabaadha. Laafaadha. ABOn OPDO wajjin lola hinqabu; warra isaan guddise wajjin malee. Miseensotni OPDO inni kaan walaalaadha. Inni kaan of jiraachisuuf jedheetti. Inni kaanimoo ABOdha. Miseensota Poolisii Oromiyaa fi Kora Bittineessaa Oromiyaa keessa hojetan ilaalu ni dandeessu. Yommuu hoggantoota ABO idoo adda adaatti arganii simachaa turan maal akka jechaa turan ni hubanna. Ijoollee Oromoo RIB keessa jiran odeeffannoo fi ergaan isaan WBOtti dabarsaa jiranis kanuma nu hubachiisa. Harki caalaan Oromummaa isaani ni beeku. Galmee QBOs ni hubatu. Dirqama gageesitoota diina QBOn guddifaman irraa itti kenname bahuuf jedhaniiti malee WBO wajjin walitti bu’uun fedhii isaani ta’ee miti. Kanaafuu waldhibdee ABO fi OPDO gidduu jirru akka rakkina QBO issa cimaatti fudhachuu hinqabnu.
Xiyyeefanoon keenya diina keenya isa cimaa irrati ta’uu mala. Sodaa ABO fi hoggantoota QBO akka Jaal Marroo fi Goolichaa irra qabaniif ijoollee Oromoo guddisani, samuu doofessani nutti ergaa jiru, duuba ta’anii. Diinota QBO Oromo beekuu qabna. Galma QBO hubachuu qabna.